महरालाई सबले उडाइरहेका छन् « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
महरालाई सबले उडाइरहेका छन्
प्रकाशित मिति : २०७६, १५ आश्विन बुधबार २१:१२
महरालाई सबले उडाइरहेका छन् ।
मेरा केही फरक धारणा:
नेपाल देशमा आजकल जिगलोको व्यापार हुन्छ । जिगलो अर्थात पुरुष बेश्या । आजकल निकै नेपाली महिलाहरु यता हरेक रात जिगलो एफोर्ड गर्ने औकात राख्छन् ।
वालेटमा बाक्लो क्याश भएपछि, जिन्दगीसँग असन्तुष्ट महिलाहरु मध्यरातमा ठमेल वा दरवारमार्गमा जिगलो खोज्दै हिँड्छन् वा सामाजिक सन्जालमा डिल्डो हन्ट गर्छन् ।
मुलुकमा प्राय: दुई दशकयता महिलाहरु अत्याधिक शक्तिशाली र सम्पत्तिवाल भइसकेका छन् । कतिपय त मल्टिपल पार्टनर पालेर जिन्दगीको रकेट उडाइरहेका पनि छन् । पहिले पुरुषले रखेल राख्थे, आजकल महिलाहरु पाल्छन् साँढे जस्ता जिगलो!
यसकारण वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपाल देशमा बलात्कारको परिभाषा रिडिफाइन हुनु अपरिहार्य भएको छ । अब यहाँ रेपको मात्रै होइन एन्टि रेपको पनि कानून बन्नु जरुरी छ । रेप भनेको पुरुषले महिलालाई जबर्जस्ति करणी गरेको भन्ने बुझिन्छ । तर पावर र पैसाले लैश कुनै स्त्रीले जब कुनै पुरुषलाई यौन दाशी बनाउँछे – तब? तब यो के हुन्छ?
स्त्रीहरु भ्रष्ट नहुन्जेलसम्म पुरातन सोचहरु कायम रहलान, तर जब –
अधर्मा भी भवेत कृष्णाम प्रदुश्यन्ती कूल स्त्रीया:
स्त्रीसु: दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णशंकर: !
तब पुरानो कानूनको के भरोसा? के आशा?
जुन समाजमा बेश्याहरु छैनन् त्यहाँ म सती सावित्रीहरुको पूजा गरुँला । तर जुन समाजमा किलोमिटर किलिमिटरमा ‘भालू’हरु भेटिन्छन् त्यहाँ के गर्ने?
त्यहाँ कसले कसलाई नैतिकताको पाठ पढाउने?
कुनै एउटी (फूँडी) कर्ल गर्ल हायर गरेर बजारको कुनै पनि मर्दलाई कुनै पनि बेला फसाउँन सकिन्छ कि सकिन्न आजकल? प्रश्न जटिल नै छ !
नेपाल देशमा यौनको कानून र व्यापार समेत एक टड्कारो वहशको विषय हुन पुगेको छ ।
किनभने, आज अनेक कारणले बजारमा सेक्स सस्तो भएको छ । यो एक कप कफी बराबर वा दुई टक्काको व्यापारमा समेत तव्दिल हुनपुगेको छ । यस्तो अवस्थामा युवतीहरुको कुमारित्वको ग्यारेण्टी लिने कसले?
आलु, भालु, कालू, ठालु, मालु, सालु, तालु, चालू, हालु — जो जे भए पनि अब जमाना फेरिए झैँ नजर आइरहेको छ । अब नेपाल देशमा पनि कामशुत्र रिडिफाइन होला जस्तो छ ।
महरा घटनाले बिल्लु बाबा र मोनिका लेवेन्स्कीको सेक्स स्क्याण्डल पनि याद दिलाउँछ । बिल्लु बाबाले अदालतमा भने, हो मैले मोनिकासँग सेक्स गरेको हो । उनलाई ब्लोज अपमा सामेल पनि गराएको हो । तर त्यो भन्दा पहिले, माइ लर्डं, मैले उनको अनुमती लिएको थिएँ ।
त्यसपछि त कसको के लाग्थ्यो? सत्य बोल्नेलाई सहानुभूति दिने अमेरिकी अदालतले बिल्लु बाबालाई सफाइ दिइहाल्यो । मोनिकाले उनको झाँट पनि हल्लाउन सकिनन् ।
तसर्थ प्रकृतिले दिएको उपहार – मानव परागशेचन – का बारे जथाभावी जीरहहरुले पनि यस कृत्यलाई सत प्रतिशत कानूनी करार दिन पनि नसकिरहेको अवस्था हो, नेपाल देशमा ।
किनभने, यस बिशेश भोकको अगाडि आन्द्राभूँडीहरुले पनि उहिल्यै हारिसकेका हुन् ।
महरालाई बलात्कारको आरोप लगाउने ती नेपाली महिलालाई न्याय मिलोस्! अब अरु के भनुम्?
#सभामुख इन रेप स्क्याण्डल!